စိတ်ကြိုက်ကြိုးမဲ့ Bluetooth နားကြပ်သတ်မှတ်စက်ရုံ၊ ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Dongguan Changsen Electronic Technology Co. , Ltd.
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ကြိုးမဲ့ Bluetooth နားကြပ် > ကြိုးမဲ့ Bluetooth နားကြပ် Parameters
1. ကြိုးမဲ့ Bluetooth နားကြပ်သတ်မှတ်ချက်များ:
နားရွက်နှစ်ခုဖြင့် Qualcomm T115 Bluetooth နားကြပ် TWS
Bluetooth နားကြပ် biearphone သည်စစ်မှန်သောကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်
G20 Bluetooth နားကြပ် Private Touch ဒီဂျစ်တယ်မျက်နှာပြင် ကြိုးမဲ့ TWS 5.0 လှုပ်ရှားမှု
S9 Digital display touch wireless Bluetooth headset 5.0 Sports mini စတီရီယို vocal cord charging pod
WirelessBluetooth headset TWS သည် ၂၇၉ လုံးနားတွင်း digital display လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်
၂ ကြိုးမဲ့နားကြပ်များ - \_ t
1）The engineer adopts the stable design of earphone series, the output voltage parameter of circuit is stable continuously, the စတီရီယို sound quality of two sides.
၂။ ယင်း၏အကြမ်းခံမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးဆားကစ်ပြားဝယ်ယူခဲ့သည် အရည်အချင်းပြည့်မီသောအမှတ်တံဆိပ်ထောက်ပံ့ရေးအစိတ်အပိုင်းများကိုနာရီ ၇၂၀ မပြတ်မတောက်စွမ်းအားဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည် အိုမင်းခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်၎င်း၏ကြာရှည်ခံမှုကိုအကြိမ်ကြိမ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
3）Wireless Bluetooth headset for power display, music support, multi-point connection,NFC function ကို, voice control, music support,
4ï¼‰အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ - နားထောင်ခြင်းအချိန် (အလယ်အလတ်အသံအတိုးအကျယ်) - ၃.၅ နာရီအားသွင်းနိုင်သောကိရိယာကို ၇ ကြိမ်အားသွင်းနိုင်သည်အမြန်အားသွင်းချိန် - မိနစ် ၄၀ - Bluetooth 5.0 အားသွင်းနိုင်သည့်အခန်း - 380mAh ဖုန်း၏စွမ်းရည် - 50mAh ရေလုံခံနိုင်မှုအဆင့် - IPX5 ထုတ်လွှင့်မှုအကွာအဝေး - ၇ - ၁၀ မီတာ
3. ကြိုးမဲ့ Bluetooth နားကြပ်
Power display, music support, multi-point connection,NFC function ကို, voice control, music support,
Circuit board အီလက်ထရွန်နစ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ head shell ကိုအားသွင်းပေးသော: PC fireproof material
1ï¼ an anational professional professional ကအသိအမှတ်ပြုထားသော၊
2ï¼ our ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး စီအတွက်အထူးစမ်းသပ်ကိရိယာများကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်မည် ထုတ်ကုန်များ။ တိုင်းထုတ်ကုန်တစ်ခုအတွေ့အကြုံစမ်းသပ်သည်။ မကျပန်း test.This တစ်ခုဖြစ်သည် ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ကိရိယာများ:
ထုပ်ပိုးမွေးစား, စိတ်ကြိုက်သေတ္တာ အပြင်ဘက်တွင်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေသော၊ PE အိတ်အစိုဓာတ်ထိန်းသောထုပ်ပိုးခြင်း။
1ï¼ spot အစက်အပြောက်ရှိနိုင်သည်။ ထိုနေ့ပင်တင်ပို့နိုင်ပါတယ်။
2ï¼‰နမူနာများကို ၇ ရက်အတွင်းပေးပို့လိမ့်မည်။
As long as you tell us your function ကိုal requirements, our engineers will provide you with design, development and production solutions. We can design to any shape and size. We've done tens of thousands of customizations, and we know how to design and produce electronics that require professionalism and consistency. Our production are fully automatic production lines, can provide you with stable quality and consistent performance of products. To establishalong-term cooperative relationship, which is conducive to maintaining the stability of product quality and follow-up technical services.Our company is mainly engaged in customization, but there are no ready-made ones. The pictures here on the Internet are all samples we ordered for the production of customers.
2ï¼ spot အစက်အပြောက်အရေအတွက်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီလျှင်ချက်ချင်းသင်္ဘောတင်ပါ။
After sale: 1. If it is the quality problem of the product itself, it leads to dissatisfaction. We will help the customer to solve the problem as soon as possible during the agreed period. 2. If the product cannot be အသုံးပြုသည်d normally due to human factors. We explain the caအသုံးပြုသည် of the problem to the customer, indicating that suchaproblem is not covered by our warranty, and then provide other solutions to the customer according to the customer's problem.
Hot Tags: ကြိုးမဲ့ Bluetooth နားကြပ် Parameters, စိတ်ကြိုက်, စက်ရုံ, ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း